Meeting – democracy for burma
On November 30, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
On October 30, 2014 November 3, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
နိုဝင်ဘာ(၂)ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်စောလားပွယ်၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
ကော်သူးလေတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ထုတ်ပြန်ချက်
အောက်တိုဘာ ၃၀ – ၂၀၁၄
သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ – ကရင်အမျိုးသား(မီဒီယာ)
DKBA ဌာနချုပ် ဆုံဆည်းမြိုင်တွင် ယနေ့ကျင်းပပြီးစီး ခဲ့သော ကော်သူးလေတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ နှစ်ရက်တာ ဆွေးနွေးပွဲ ထုတ်ပြန်ကြညာချက် အပြည့်အစုံ
ယနေ့ DKBA ဌာနချုပ် ဆုံဆည်းမြိုင်တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် ကော်သူးလေတပ်မတော် ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
အောက်တိုဘာ – ၃၀ – ၂၀၁၄
Audio ကရင်အမျိုးသား(မီဒီယာ) – ကော်သူးလေတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်
ကိုပါကြီးသည် (KKO) လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မိုရှေး ပြောဆို.
အလွတ်တန်းသတင်းထောက်ကိုပါကြီးသည် DKBA ၏နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ KKO နှင့် လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိသည့် သတင်းထောက်တဦးဖြစ်သည်ဟု အဖွဲ့၏ဒုစစ်ဦစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်စောမိုရှေးက ယနေ့ညနေက ဌာနချုပ်တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းထောက်များကို တရားဝင်ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
ကေကေအိုတွင် ပြန်ကြားရေးဌာနမရှိကြောင်း ကိုပါကြီးသည် ဒီကေဘီအေမှပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားများကို ပုံမှန်သတင်းလာယူသည့် သတင်းထောက်ဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
ယနေ့ညနေက ဒီကေဘီအေဌာနချုပ် ဆုံဆည်းမြိုင်တွင်ပြုလုပ်သည့် ကော်သူးလေတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် ပြု လုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပုံစာ – ယနေ့ညနေတွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ။ cr. ကရင်အမျိုးသား- မီဒီယာ
#အလုပ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့ #Labour #Rights #Defenders and #Promoters #BURMA #MYANMAR
On October 6, 2014 October 6, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Labour Rights Defenders and Promoters
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (FTUM) မှ ဦးမင်းလွင် ၏
၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၄ရက်
၁။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက်၁၀နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ် သမားအဖွဲ့ချုပ်ရုံး (ILO) တွင်ပြုလုပ်သော Educator
Network အစည်းအဝေးသို့ အလုပ်သမားအခွင့် အရေး ကာ ကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ
့(LRDP) မှ ဒေါ်အိရွှေစင်ညွန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၂။ အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်း ဦးမင်းလွင်
(အလုပ်သမားသမဂ္ဂအရေး/ လူ့ အခွင့်အရေးဌာန အတွင်းရေးမှူး –
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်) မှ ဒေါ်အိရွှေစင်ညွန့် အား “ITUC သို့ 
၎င်း၏အကြောင်းအား စာပို့သလား” ဟု မေးမြန်းရာ ဒေါ်အိရွှေစင်ညွန့်မှ “စာပို့
ခဲ့ကြောင်း” ဖြေကြား ခဲ့ခြင်းအပေါ် ရင့်သီးသောစကားလုံးများ၊
ရိုင်းပြသောဆဲဆိုမူများဖြင့်ပြောဆိုပြီး ဦးမင်းလွင် မှ
ဒေါ်အိရွှေစင်ညွှန့်အား ကိုယ်ထိလက်ရောက် လူမဆန်သောအပြုအမူဖြင့်
၃။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် (ITUC) မြန်မာရုံးခွဲနှင့် Continue reading “#အလုပ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့ #Labour #Rights #Defenders and #Promoters #BURMA #MYANMAR” →
#หลวงปู่ #พุทธะอิสระ #มา #ช่วยชาติ #แต่ต้องปราศจากวาระซ่อนเร้น
มาเถิดท่านผู้รู้ มาช่วยกันดู ช่วยกันถาม ช่วยกันนำเสนอ สิ่งที่รู้ลึกรู้จริง รู้แจ้งเรื่องพลังงาน ช่วยกันทำให้ข้อสงสัยของคนทั้งประเทศเหือดหาย มาช่วยกันจับคนโกงคนโกหก มาช่วยกันสร้างมาตรฐานในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องพิสูจน์ได้ มาช่วยกันทำให้วิวาทะเรื่องพลังงานมันยุติเสียที มาช่วยกันสร้างที่พึ่งอันยั่งยืนทางพลังงานให้ตัวเราและลูกหลาน มาช่วยกันขจัดความไม่เที่ยงธรรมในเรื่องพลังงาน
พวกเรานักสู้ทั้งหลายคุยกันฝ่ายเดียวมานานแล้ว เวลานี้คู่กรณีเขายอมออกมาพูดคุยด้วย แล้วพวกเรายังลังเลอะไรอยู่ ยิ่งเนิ่นนานไป ยิ่งบังเกิดความเสียหาย พวกเราสู้กันมายาวนาน ตอนนี้มีคำตอบแล้ว ยังจะรีรออยู่กันไปไย มาพบกันได้ที่ห้องประชุมกองทัพบก วันพุธที่ 27 เวลา 9.00-16.00 น. ขอวิงวอนให้ท่านผู้รู้ นักสู้ทั้งหลายโปรดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ละทิ้งความเห็นส่วนตัว ลดมานะทิฐิ มีความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง มาร่วมกันให้มากๆนะจ๊ะ